विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ नियुक्त हुने सम्भावना कति त? – News Book Online
विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ नियुक्त हुने सम्भावना कति त?
असार ३०, २०७८ ०७:०३ प्रकाशित
काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवासँगै चार जना मन्त्रीले पनि शपथ लिएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ, उहाँ रुपन्देहीबाट समानुपातिक सांसद हुनुहुन्छ ।यस्तै कांग्रेसकै ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । कार्की सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ ।
यस्तै अर्थ मन्त्रीमा माओवादीबाट जनार्दन शर्मा नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँ रुकुम पश्चिमको क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित हुनुभएको हो । उहाँ यसअघि गृह र ऊर्जा मन्त्री बनिसक्नुभएको छ ।यस्तै आजै माओवादीकी नेतृ पम्फा भुसालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । उहाँ ललितपुर ३ बाट निर्वाचित हुनुभएको हो ।
यो पनि:भोली बालुवाटार छाड्दै ओली, २ हजार गाडीको स्कटिङले बालकोटसम्म पुर्‍याउने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ती भएसँगै केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।
येसैबीच प्रधानमन्त्री ओली भोली (बुधवार) बालुवाटारबाट बालकोटस्थित आफ्नो नीजी निवास जाने भएका छन् ।ओलीको स्वागतमा २ हजार वटा गाडी र ३ हजारवटा मोटरसाइकल उपस्थित हुने नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले लोकपथलाई जानकारी दिए ।उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकी पुनः नेकपा एमालेकै सरकार बन्ने दाबी पनि गरे ।